Maqaallada Rebecca Clyde ee Martech Zone |
Maqaallada by Rebecca Clyde
Rebecca Clyde waa aasaasaha iyo maamulaha Botco.ai, oo ah bilow u fidinaya kobcinta sheekaysiga caqliga leh macaamiisha daryeelka caafimaadka. Iyada oo in ka badan 20 sano ku jirtay suuqgeynta dhijitaalka ah ee warshadaha teknolojiyadda, waxay aad u jeceshahay inay horumariso haweenka xagga tiknoolojiyadda waxayna u adeegtay agaasime isku-duwaha Gabdhaha Tech Phoenix muddo 3 sano ah. Kahor Botco.ai, Rebecca waxay aasaastay hay'ad suuqgeyn dhijitaal ah, Fikradaha Collide, hadda waxay ku jirtaa sannadkeedii 15 -aad oo u adeegta macaamiisha meheradaha caalamiga ah. Waxay hore u ahayd maareeyaha suuqgeynta Intel waxayna MBA ka haysataa Jaamacadda Gobolka Arizona.
Khamiista, Sebtember 9, 2021 Khamiista, Sebtember 9, 2021 Rebecca Clyde
Aaladaha sheekaysiga ee AI waxay albaabka u furi karaan waayo -aragnimo dhijitaal ah oo wanaagsan iyo beddelidda macaamilka. Laakiin waxay sidoo kale taangi karaan khibradaada macmiilka. Waa tan sida loo saxo. Macaamiisha maanta waxay filayaan in ganacsatadu ay keenaan khibrad shaqsiyeed oo aad dalbato 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii, 365 maalmood ee sannadka. Shirkadaha warshadaha kasta waxay u baahan yihiin inay ballaariyaan habkooda si ay u siiyaan macaamiisha xakamaynta ay raadsadaan oo ay u beddelaan qulqulka